दाद आयो भने के गर्ने ? यसबाट कसरी जोगिने ? - Setoparewa Setoparewa
दाद आयो भने के गर्ने ? यसबाट कसरी जोगिने ?
ढुसी कस्तो ठाउँमा पर्छ र कसरी पर्छ? धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो। बासी खानामा, ओसिलो ठाउँमा ढुसी पर्ने हो। प्रायः घर वा कोठाको कुनातिर ढुसी परेको देखिन्छ। मान्छेमा पनि यही नियम लागू हुने हो।
यसलाई मेडिकल भाषामा ‘डम्र्याटोफाइसिस’ भनिन्छ । खासगरी, छालाको सतहमा रहेका मृत कोषमा ढुसी पलाउँछ । त्यसैले यसलाई ‘सुपरफिसियल फंगस’ पनि भनिन्छ।
आफू सफासुग्घर रहँदारहँदै पनि कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याबाट पीडित भएको गुनासो सुन्ने गरिन्छ। यो अरुबाट सरेर आएको हुन सक्छ। यस्तो चिलाउने ढुसी माटो, जनावर र अरु व्यक्तिबाट सर्ने गरेको पाइन्छ।
गाउँघरमा धेरै मानिस जनावरबाट सरेको दादले पीडित हुन्छन्। त्यसैले कतिपयले यस्ता दादलाई ‘भैँसे दाद’ पनि भनेको सुनिएको छ।साथीहरुसँग लुगा साटेर लगाउँदा, एउटै तौलियाको प्रयोग गर्दा वा परिवारका अन्य सदस्यबाट पनि दाद सर्न सक्छ।
औषधि प्रयोग गर्ने धेरैलाई थाहा होला, मेडिकलवालाले ‘क्लोबिन जी’ नामक औषधि दिइरहेका हुन्छन्। यसमा चारवटा औषधि मिसिएको हुन्छ। एउटाले काम नगरे अर्कोले त गर्ला भनेर यस्तो गरिएको हो। जसलाई अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो मान्न सकिन्छ।
यसमा चिलाउन रोक्ने तत्व हुने भएकाले चिलाउने समस्या कम हुन्छ तर पछि फेरि बल्झिन्छ।
कानले दिन्छ यी रोगहरुबारे पूर्व संकेत
एड्स दिवस र नेपालमा यसको अवस्था
एक दिनमै अनुहारको नचाहिएको रौं हटाउन यस्तो छ उपाय !